Medicine "Amiodarone" ngaphambili isicelo kuphela ekwelapheni angina. Nokho, abacwaningi kamuva umsebenzi wayo antiarrhythmic itholiwe. Kusukela izidakamizwa yasheshe emhlabeni wonke. Namuhla, enye indlela ephumelela kunazo lomisiwe ezivimbayo futhi ekwelapheni arrhythmias kuyinto izidakamizwa "Amiodarone".
Umuthi itholakala amaphilisi kanye isixazululo komjovo (ngomjovo). Kusho "Amiodarone" imiyalelo ukusebenzisa kuya imithi ethile eqeda arrhythmic grade wesithathu. Umuthi has a hypotensive, beta-alpha-adrenoceptor Ukuvinjwa, vasodilatig nomphumela antianginal.
umsebenzi Antianginal lihlotshaniswa ukuchayeka antiadrenergeticheskim futhi koronarorasshiryayuschee, wehlise esivimba amanzi nomoya-mpilo funa. Umuthi uyakwazi ukunciphisa nokuzwela nozwela hyperstimulation sezinzwa ohlelweni tonus izitsha yenhliziyo, ukuthuthukisa i-coronary ukugeleza kwegazi, siyehla kwenhliziyo, futhi sandise izinqolobane amandla we myocardium.
Kusho "Amiodarone" yokusetshenziswa Kunconywa for nokwelashwa kwezinkinga paroxysmal isigqi iziyaluyalu: ventricular arrhythmias, ezisongela ukuphila ventricular fibrillation, arrhythmias supraventricular (ngokuvamile kakhulu ukungakwazi noma ukwehluleka yingaba yini engakusiza). Ngu izinkomba futhi zihlanganisa i-angina, parasystole, ezingamahlalakhona inhliziyo arrhythmia noma esingamahlalakhona senhliziyo, ventricular futhi arrhythmias atrial, paroxysm atrial futhi fibrillation atrial.
Nomuthi "Amiodarone" imfundo manual ayikuvumeli ukuqokwa uma hypersensitive (kuhlanganise iodine), atrioventricular block wesibili kanye degree lwesithathu, itheku bradycardia, interstitial wamaphaphu nesifo, i-hyperthyroidism, i-hypothyroidism, hypotension. Akunconyelwe imithi ngesikhathi lactation nokukhulelwa yokwehluleka kwesibindi.
Ngokuqapha okwedlulele kusho "Amiodarone" inikezwa kwasebekhulile.
Ngenxa yokuntuleka idatha ukuphepha, Kunconywa izidakamizwa ukuze iziguli ezineminyaka engaphansi kwengu iminyaka eyishumi nesishiyagalombili ubudala.
Phakathi imiphumela emibi lesi sidakamizwa "Amiodarone" imfundo manual kubonisa ukusangana sokuzwa, paresthesia, ukukhathala, ukucindezeleka, ukuba nesiyezi, ubuthakathaka, ikhanda. Long reception izindlela kungabangela ataxia, izimpawu extrapyramidal, ubuthongo isiphithiphithi uphazamise nezimoto inkumbulo, liqhaqhazela, peripheral neuropathy. Imiphumela engemihle zomuthi "Amiodarone" imfundo manual libhekisela atrioventricular block, itheku bradycardia, ukuthuthukiswa noma nokuqinisa arrhythmias ekhona, alveolitis, iphika, ukukhwehlela, effusion pleural, cystic yamaphaphu. Umuthi kungase kuvuse uhudo, ukubuyisa, ubuhlungu besisu, inhliziyo emnyama, inhliziyo disorder, ukuphazamiseka noma ukulahlekelwa ukunambitheka, ukuhlanza, neminye imiphumela engathandeki. With ukuthuthukiswa hyperthyroidism kusho ukuthi ufuna ukukhansela.
Cupping (ekuqedeni) isigqi abukhali iziyaluyalu eyenziwa abaphathi emthanjeni. Umthamo izinga ngaleyo ndlela isethi angu ezinhlanu amakhilogramu esisindo ngalinye, ngoba iziguli senhliziyo esigabeni ezingamahlalakhona - 2.5 milligram kilogram per.
Umuthi 'Amiodarone "ngefomu ithebhulethi Kunconywa ekuphathweni temlomo ngaphambi kokudla. Isikali isilinganiso - 0.6-0.8 g at izingxenye ezimbili noma ezintathu. Ngemva kwezinsuku ezinhlanu kuya nanhlanu ukunciphisa umthamo 0.3-0.4 g ngelanga. Emva isiguli udluliselwa ukwelashwa yesondlo. Umthamo lokhu kusakhela isilinganiso - 0.2-0.3 amagremu ngosuku. Inani zomuthi sehlukaniswe ngemithamo ezimbili noma ezintathu.
Ngaphambi kokufaka isicelo izimali "Amiodarone" kudingeka ukuba bahlolwe. Ngaphambi kokuthatha lesi imithi Kunconywa ukuba ufunde imiyalelo.
Umuthi 'Trilakt ": yokusetshenziswa, ngempela